गारलैंड आफ्नो हातले कागज को गरे।
एक छुट्टी मुड सिर्जना गर्न कठिन तदनुसार कोठा सजाउनु पर्याप्त छ। नयाँ वर्ष मा सेन्ट भ्यालेन्टाइनको घर को दिन एक क्रिसमस ट्री स्थापना गर्न, सबै सम्भव calibres को हृदय भरिएको छ विषयको निर्णय ज्ञान दिन शरद ऋतु पात को सुट गारलैंड। स्वाद र कल्पना टाउको-मा हरेक घटना पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। हाम्रो भाग लागि, हामी पनि भित्री सजावट लागि केही रोचक विचार प्रस्ताव।
आफ्नो हातले क्रिसमस गारलैंड।
सबैभन्दा रोमान्टिक र रहस्यमय दिन, पाठ्यक्रम, कि जब हामी भन्न अलविदा
को बाहिर जाने वर्ष संग। परम्परागत क्रिसमस ट्री, twinkling रोशनी, सत्यनिष्ठा सजाया तालिका, राम्रो-लुगा बच्चाहरु र वयस्क। यो छुट्टी शाब्दिक घर को हरेक कुना भरिन्छ। तसर्थ, एउटा सुन्दर गारलैंड, आफ्नै हातले बनाएको धेरै उपयोगी यस मामला लागि।
अब बिक्री मा भोज अघि त्यहाँ राम्रो सानो आकार कार्ड को धेरै छ। Windows सरल लागि एक सजावट गर्नुहोस्। सानो क्लिप वा clothespins को माध्यम द्वारा एक स्ट्रिङ मा तस्वीर संलग्न र तयार festoon।
हाम्रो बाल्यकाल को दिन, तपाईं आफ्नै हात गारलैंड Serpentine को थियो संग एक्लै छन्। आज किन आफ्ना छोराछोरीलाई यो सरल विज्ञान सम्झना छैन।
सरल बहु-रंग कागज को एकाइहरु मिलेर एक श्रृंखला festoon। थप फैंसी कुरा - म केहि गर्न चाहनुहुन्छ? हृदय को रूप मा तत्व को एक सजावट गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई एक ग्लू वा स्ट्यापलर, कैंची र streamers आवश्यक बनाउन। एउटै आकार को दुई स्ट्रिप्स को एक हृदयको आकार, को बन्धन प्राप्त गर्न तल बारी परस्पर छन्। अर्को चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको तत्व अघिल्लो पटक गर्न fastened। यो अन्त गर्न, गोंद दुई स्ट्रिप्स को तेज अन्त, त्यसपछि तल उनलाई, अघिल्लो मामला मा रूपमा बारी, र प्रत्येक अन्य जडान। सञ्चालन रूपमा लामो सम्म तपाईं गारलैंड को इच्छित आकार प्राप्त दोहोर्याइएको छ।
लाग्छ उज्ज्वल रंग को भित्री को मुख्य सजावट? त्यसपछि नालीदार कागज को एक प्याक लागि स्टोर जानुहोस्। आफ्नो हात यो गारल्यान्ड सजिलो छ। एक बाजा जस्तै तह बराबर आकार टुक्रा मा कागज कटौती, र क्षेत्र वा एक अर्धवृत मा समाप्त काटेर। केन्द्र, पेट-wrenching प्रत्येक क्लिप बन्धन, राउन्ड प्राप्त गर्न। व्यक्तिगत तत्व कुनामा द्वारा परस्पर छन्।
सामान्य रंग कागज बाट यो एक राम्रो गारलैंड बनाउन पनि सजिलै सम्भव छ। प्रत्येक पाना एक बाजा जस्तै तह, चार बराबर भागमा कटौती गरिएको छ, र हामी बीचमा प्रत्येक क्लिप समातेर। त्यसपछि, हामीले ठीक एक अर्ध-सर्कल प्राप्त गर्न गर्दछ। तत्व एक कंपित खाद्यान्नहरूको प्रत्येक अन्य जडान।
आफ्नो हातले कागज को Volumetric चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको।
तीन-आयामी सजावट tinkering गाह्रो छैन, तर समय यो एक सानो लामो समय लाग्छ। यस्तो रचनात्मकता छोराछोरीलाई आकर्षित गर्न एकदम सम्भव छ। त्यसपछि Garland, आफ्नै हातले बनाएको, मात्र घरमा सजावट, तर पनि यसको निर्माताहरू को गर्व हुनेछ।
आवश्यक कैंची, बाक्लो गत्ता रंग, काम गर्न PVA गोंद, सुतली।
को गारलैंड को व्यक्तिगत तत्व परस्पर चार समान कागज तथ्याङ्कले बनेको छन्। नयाँ वर्षको लागि, तपाईं क्रिसमस रूखहरू आकार चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
एउटै आकार तत्व कटौती (यसलाई छिटो गर्ने, प्रयोग गर्न , कुकीहरू को फारम) बीचमा तिनीहरूलाई मोड र चार द्वारा प्रत्येक अन्य जडान। यस मामला मा सुतली यो सम्बन्ध गाँसिसकेको मा तुरुन्तै राख्नु राम्रो हो।
हृदय गारलैंड तपाईंलाई थाहा रूपमा, आइटम फरक आकार हुनेछ, एउटै प्रविधि हो, तर।
क्रेप कागज - प्लास्टिक सामाग्री, पनि एकदम सुन्दर। प्रसन्न - त्यसैले उनको उत्सव गारलैंड को tinkering। , खोल्दै बिना नालीदार कागज को एक रोल लिन र धेरै बराबर भागमा यो कटौती। किनाराको दुवै पक्षले गोलाकार र कट fringes छन्। त्यसपछि, परिणामस्वरूप रिबन खोल्नुहोस् र आफ्नो सर्पिल घुमाई। तपाईं एक स्ट्यापलर लो सक्नुहुन्छ स्थानहरू Folds।
यो गारलैंड केही मिनेट लागि आफ्नै हातले बनाएको छ। यो धेरै मूल र सुन्दर, तर लायक देखिन्छ।
हामी आफ्नो हातले मूल विवाह गुलदस्ता
आश्चर्य अतिथि - घर मा सुखा
कसरी स्क्रैप सामाग्री र स्मार्टफोन बाहिर एक रेडियो बनाउने? रेडियो लागि एन्टेना। रेडियो को प्रभाव
साँच्चै - आफ्नो हातमा एक ओछ्यानमा बनाउन?
घर चिसो फोर्जिंग मेसिन: विनिर्माण प्रक्रिया
बनाउन आफ्नै हात गाँस्न? शायद!
रूपमा महिला मा प्रकट एड्स लक्षण?
VAZ-2109: मिलाउने। VAZ-2109 को लागि स्पेयर पार्ट्स
सामुराई कवच: नाम, विवरण, पद। सामुराई तरवार
कुर्सियों लागि संयन्त्र Tilting। प्रकार, कसरी चयन गर्न
घर मा वजन गर्न आहार व्यञ्जनहरु
कसरी जंक र अनावश्यक कुराहरू छुटकारा प्राप्त गर्न?
OBS: Twitch लागि कसरी कन्फिगर गर्न?
दही MOULINEX: घर मा एक स्वादिष्ट उत्पादन
विन्डोज 10 कसरी ठीक-मिलाउने छ: चाल र सुझावहरू
स्कारलेट ज्वरो। लक्षण र यसको उपचार।
ओडी A4, समीक्षा